मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2015-03 > कानून र अनुग्रह
जब मैले केही हप्ता अघि बिली जोएलको गीत "स्टेट अफ माइन्ड न्यू योर्क" सुन्दै थिएँ, जब म मेरो अनलाइन समाचारहरू हेर्दै थिएँ, मेरो आँखा अघिल्लो लेखमा गयो। यसले वर्णन गर्दछ कि न्यूयोर्कको राज्यले भर्खरै एउटा कानून पारित गर्‍यो जसमा घरपालुवा जनावरलाई टाटु बनाउने र छेड्ने काममा रोक लगाइएको थियो। यो जस्तो कानून आवश्यक छ भनेर सिक्न मलाई खुशी लाग्यो। स्पष्ट रूपमा, यो अभ्यास एक प्रवृत्ति भइरहेको छ। मलाई शंका छ कि धेरै न्यू योर्कले यो कानून पारित गरेको याद गरे किनभने हालसालै त्यस राज्यमा लागू गरिएको धेरै मध्ये एक यो थियो। प्रकृति द्वारा सरकारहरु सबै स्तरहरु मा एक कानूनी मानसिकता छ। उनीहरूले धेरै नयाँ निषेध र आदेशहरू अपनाइरहेका छन् भन्नेमा कुनै श .्का छैन। प्राय: जसो तिनीहरू विश्वलाई उत्तम ठाउँ बनाउने कोशिश गरिरहेका छन्। कानूनहरू कहिलेकाँही आवश्यक पनि हुन्छ किनकि मानिसमा सामान्य समझको कमी हुन्छ। यद्यपि न्यूज च्यानल सीएनएनले रिपोर्ट गरेको छ कि २०१ 201440.000 मा अमेरिकामा०,००० नयाँ कानून लागू भएको थियो।
किन यति धेरै कानून?
केवल येशूको अनुग्रहले यो येशू र पवित्र आत्माको मेलमिलाप कार्यमार्फत प्राप्त गर्न सक्दछ। जस्तो कि पावलले गलाती २:२१, [GN] मा लेखे: God's म परमेश्वरको अनुग्रहलाई अस्वीकार गर्दिन। यदि व्यवस्था पूरा गरेर हामी परमेश्वरसामु खडा हुन सक्थ्यौं, तब ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नुहुने थियो "।
यस सम्बन्धमा, कार्ल बार्थले स्विस जेलमा रहेका कैदीहरूलाई पनि प्रचार गरे:
"त्यसोभए आउनुहोस् बाइबलले के भन्छ र हामी इसाईको रूपमा हामीले सँगै सुनुवाइनु पर्ने कुरा सुनौं: तपाईं अनुग्रहले छुटकारा पाउनुभयो! यो आफैलाई कसैले भन्न सक्दैन। न त उसले अरू कसैलाई बताउन सक्छ। केवल भगवानले हामी प्रत्येकलाई यो बताउन सक्नुहुन्छ। यस भनाइलाई सत्य बनाउन येशू ख्रीष्टलाई आवश्यक छ। तिनीहरूलाई कुराकानी गर्न प्रेरितहरू लाग्छ। र हामी यहाँ इसाईहरु को रूप मा हाम्रो सभा फैलाउन को लागी लिन्छ। यसैले यो इमान्दार समाचार र एकदम विशेष सन्देश हो, सबैको सब भन्दा रमाइलो समाचार, साथ साथै सबैभन्दा सहयोगी - वास्तवमै एक मात्र सहयोगी हो।
जब शुभ समाचार, सुसमाचार सुने, कोही मानिसहरू डराउँछन् कि परमेश्वरको अनुग्रहले काम गर्दैन। कानूनी विज्ञहरू विशेष गरी चिन्तित छन् कि मानिसहरूले अनुग्रहलाई आधिकारिक बनाउँछन्। येशूद्वारा प्रकट गरिएको सत्यलाई तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्न जुन हाम्रो जीवनमा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हुन्छ। उहाँसँग सेवा गरेर, सृष्टिकर्ता र उद्धारकको रूपमा उहाँको स्थान कुनै पनि हिसाबले मनमानी ढ questioned्गले प्रश्न नगरिएको छ।
हाम्रो भूमिका बाँच्न र खुशीको खबर बाँड्न, परमेश्वरको प्रेमको घोषणा गर्न, र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्म-प्रकट र हस्तक्षेपको लागि कृतज्ञताको एक उदाहरण हो। कार्ल बार्थले “चर्च डगम्याटिक्स” मा लेखे कि परमेश्वरप्रतिको यो आज्ञाकारिता कृतज्ञताको रूपमा सुरू हुन्छ: "अनुग्रहले कृतज्ञता पैदा गर्दछ, जसरी आवाजले प्रतिध्वनित गर्छ।" कृतज्ञता अनुग्रह लाई बिजुलीको गर्जन जस्तै पछ्याउँदछ।
बारथले थप टिप्पणी गरे:
God जब भगवानले प्रेम गर्नुहुन्छ, उसले आफ्नो भित्री व्यक्तित्वलाई उसले प्रेम गर्दछ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ र त्यसैले सks्गतिको खोजी गर्दछ र सिर्जना गर्दछ। यो हुनु र गरिरहनु ईश्वरीय हो र प्रेमको सबै प्रकारका भन्दा फरक छ कि प्रेम परमेश्वरको अनुग्रह हो। अनुग्रह भनेको ईश्वरको अतुलनीय प्रकृति हो किनकि यसले आफ्नो स्वतन्त्र प्रेम र अनुमोदनको माध्यमले समुदायको खोजी गर्दछ र प्रियताको दाबी बिना कुनै शर्त वा कुनै अयोग्य वा विपक्षले रोक्दैन, बरु विपरितमा, सबै अस्वाभाविकताको लागि र सबै प्रतिरोध पार गर्न। यो भिन्नताले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमको ईश्वरीय पहिचान गर्न सक्षम गर्दछ।
म कल्पना गर्न सक्छु कि तपाईको अनुभव मेरो भन्दा फरक छैन जब यो कानून र अनुग्रहको कुरा आउँछ। तपाईं जस्तै, म कानूनको प्रति प्रतिबद्ध छ जो एक भन्दा बरु प्रेम संग आउँछ कि एक सम्बन्ध छ। हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहको कारण, हामी पनि उहाँलाई प्रेम गर्न र उहाँलाई खुशी पार्न चाहन्छौं। अवश्य पनि म कर्तव्यबोधबाट उसको आज्ञापालन गर्न सक्दछु, तर म बरु उसको साथ वास्तविक प्रेम सम्बन्धको अभिव्यक्तिको रूपमा सेवा गर्दछु।